When you designafont, you need two different expertises; designing glyphs and writing opentype rules. For Example, Burmese glyphs from Pyidaungzu font were donated by Myanmars Net whilst Ko Sun Tun wrote opentype rules. Typeface design, reference and appreciation becomes important in digital age. Even people beyond design world would preferafont over design than it’s features. When someone cannot design glyphs/typeface, they may buy it or use fromafont with opensource license. Original Zawgyi font committed typeface piracy (and won the award from MCPA). Let’s talk about Asoka font.
Asoka font isaMyanmar Unicode font specially designed for Adobe products when Adobe didn’t support Burmese font reordering. The intention was good. The practice wasn’t.
Asoka Myanmar typeface are modified glyphs from Arthouse w01
Asoka English typeface are glyphs from Microsoft Segoe UI
If you work with vertex, bazier in design industry, you can see the original vectors are played aroundabit. It simply modified and copied glyphs from Arthouse w01 and Segoe UI and claimed as their own. Plagiarism and theft are easily ignored in this country’s weak IP law. But we know.
Related Post: ဖောင့်ခိုးခြင်းအကြောင်း
There have been three opensource Zawgyi<->Uni js converters in the past: Burglish, Parabaik, Thanlwinsoft. Burglish which was most compact closed it’s source in early age of mmitpro(wasageek forum around 2007/8). Thanlwinsoft is the longest and most complex converter but with least conversion mistakes. Parabaik (originally Paragu) converter is simplest and easiest to understand. I will make it short. Rabbit converter isaline-by-line rewrite of parabaik converter, is claimed to write by their own and does not credit to parabaik. Actually, Parabaik itself is an opensource and anybody can freely use or contribute to it. Here is the detailed comparison of js of Parabaik and Rabbit early version. Samples for same conversion mistakes: (uni2zg ကမ္ဘောဇ အဋ္ဌေသု ဉှာ သင်္ကေတ zg2uni အက်ႌ သခ်ႋဳင္း, There are more but omitted for further issues.)
Is givingaproper credit that difficult?
Related Posts: Copyright Converter Credit is Respect
ဇော်ဆရာတွေက ဇော်ဂျီမှာ u1039 ဝိရာမ(အသတ်) ကို အသတ်လို့ သုံးထားပြီး ကုဒ်ပွိုင့်အသစ်တွေရတဲ့အခါ ဇော်ဂျီနဲ့လွဲအောင် တမင် လွှဲလိုက်တယ် (u1039 ကို ပါဌ်ဆင့်ရေးတဲ့ ဝိရာမနေရာမှာ ထားလိုက်ပြီး u103A ကို အသတ်နေရာမှာထားလိုက်တယ်) လို့ ပြောပါတယ်။ အဲလိုလွှဲလိုက်တဲ့အတွက် အရင်ယူနီကုဒ် Contents တွေက ဒီဘက်မှာ သုံးမရတော့ဘူး၊ အဲလိုသဘောမျိုးရေးပါတယ်။ ရှင်းဖို့ မလိုလောက်ဘူးတွေးပေမဲ့ အဲဒီကိစ္စကို မီဒီယာထဲမှာ ခဏခဏထည့်ထည့် ပြောနေတော့ တတ်နိုင်သလောက် လူပြိန်းနားလည်အောင် ရှင်းကြည့်ပါမယ်။
(၁) ဇော်ဂျီက ယူနီကုဒ်လေးကို အခြေခံထားတယ်ဆိုတာရယ် ယူနီသမားတွေက စိတ်ပုတ်ပြီး ယူနီကုဒ် ငါးမှာ ပင့်ရစ်ဆွဲထိုး တစ်ကွက်ရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတာရယ်။ ဇော်ဆရာတွေကလည်း အဲဒီအကြောင်းတွေ ခဏခဏပြောပါတယ်။ ယူနီကုဒ်ကိစ္စတွေ ဝင်မပြောတော့ဘူးတွေးပေမယ့် ရှင်းသင့်တယ်ထင်လို့ ရေးပါတယ်။
ယူနီကုဒ် 4, 4.1, 5.0 ထိ မြန်မာစာကုဒ်ပွိုင့်နဲ့ အန်ကုဒ်ဒင်းက တူတူပါ။ ဆရာတို့ တစ်သက်လုံး မီဒီယာပေါ်မှာ ဗားရှင်းတွေ မှားပြောလာတာ ပြင်ရအောင် တင်ပေးပါတယ်။ ပင့်ရစ်ဆွဲထိုးနဲ့အသတ်အတွက် ကုဒ်ပွိုင့်မရပါ။ ဝိရာမ ရယလဝ မော်ဒယ်နဲ့ ရေးရပါတယ်။ 5.1 မှာ ပင့်ရစ်ဆွဲထိုးနဲ့ အသတ်စရပါတယ်။
(၂) Unicode 4.0 ကနေ 5.0 ထိအတူတူပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ အသတ်အကြောင်းကို ဖိဖိပြောနေတဲ့အတွက် အသတ်အကြောင်းပဲ အသေးစိတ်ရှင်းကြည့်ပါမယ်။ 5.1 မတိုင်ခင် မြန်မာစာအတွက် အသတ် သတ်သတ် မရပါ။ ဝိရာမနဲ့ အသတ်ဟာ ဘာသာဗေဒအရ အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်လုံးပဲ ပေးပါတယ်။ ဗျည်း+u1039(ဝိရာမ)+ဗျည်း ဆိုရင် ပါဌ်ဆင့်ရပါတယ်။ ဗျည်း+u1039+u200C(zwnj) ဆိုရင် အသတ်ပုံ ပုံဖော်ပြပါတယ်။
(၃) အမှန်က zwnj သုံးပြီး render လုပ်တဲ့ မော်ဒယ်က ဗြဟ္မီအခြေခံ ဘာသာတော်တော်များများမှာ ဒီအတိုင်း သုံးပါတယ်။ ဒါပေသည့် မြန်မာစာအပြင် တခြားသုံးတဲ့ တိုင်းရင်းသားပါဌ်ဆင့်တွေနဲ့ ရောနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာ၊ အဲဒီအချိန်က ‌Opentype ကိုထောက်ပံ့တဲ့ ဆော့ဝဲတွေ အားနည်းမှုကြောင့် Rendering အလုပ်ဖြစ်မယ့် Solution တစ်ခု လိုလာပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကုဒ်ပွိုင့်ထပ်တောင်းပါတယ်၊ ရပါတယ်။ (အသေးစိတ်နဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေ ဇော်ဆရာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ စာစောင်မှာ အကုန် ရှိပါတယ်)
(၄) ဒီနေရာမှာ ကုဒ်ပွိုင့်တောင်းပေမယ့် သက်သေအထောက်အထား မခိုင်လုံရင် ပေးလေ့မရှိသလို အသစ်တစ်နေရာရဖို့ အင်မတန်ခဲယဉ်းကြောင်း သဘောပေါက်ထားဖို့ လိုပါမယ်။ Encoding အတွက် ကုဒ်ပွိုင့် တစ်ပွိုင့်တိုးရတိုင်း Data သိမ်းတဲ့နေရာ သက်သာသွားလေ့ရှိတဲ့အတွက် ကြိုဆိုရမယ့် အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) ဒီနေရာမှာ u1039 ဟာ အသတ်မဖြစ်ဘဲ ပါဌ်ဆင့်ဖြစ်သွားတဲ့ အခါမှာ ဇော်ဆရာတို့ မကျေနိုင်မချမ်းနိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ (ဟုတ်လားမဟုတ်လား ဒီနေ့ထိ အင်တာဗျူးမှန်သမျှ ထည့်ထည့် ပြောနေတာ ကြည့်ပါ)။‌ Prejudice ဖြစ်တဲ့အမြင်တွေကို ခဏဖယ်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ ဗျည်း+u1039+ဗျည်း=ပါဌ်ဆင့် ကနေ ဗျည်း+u1039+ဗျည်း=ပါဌ်ဆင့် ဖြစ်သွားတာမို့လို့ ပါဌ်ဆင့် Encoding သည် မပြောင်းလဲပါ။ ဗျည်း+u1039+u200C နေရာမှာ ဗျည်း+103A ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် (က) ဒေတာသိမ်းတာ တစ်နေရာ သက်သာပါတယ် (ခ) ICU တန်ဖိုးအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက် အက္ခရာစဉ်တာ၊ ရှာဖွေတာတွေမှာ မပြောင်းလဲပါ (ဂ) ဒီ Encoding ဟာ Absolute မဖြစ်တဲ့အပြင် တရားလည်းဝင်ပါတယ်။ လက်ရှိယူနီကုဒ်ဖောင့်တွေမှာ u1039+u200C=u103A ဆိုတဲ့ Ligature တစ်ခုပေါင်းထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ ဒီအသတ်ကိုမြင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ (ပင့်ရစ်ဆွဲထိုးလည်း ထိုနည်း၎င်း၊ ထည့်ရေးတာ မရေးတာ ဖောင့်ရေးသူတွေကဏ္ဍ) (ဃ) ဒီအဟောင်းနဲ့ရေးထားတဲ့ ဒေတာတွေ ဘယ်လောက်မှ မရှိခဲ့သေးတာလည်း ထည့်ပြောရမယ်။
ဇော်ဆရာတွေနဲ့ စကားပြောရင် ယူနီကုဒ် ဘာဖြစ်တယ်၊ ညာဖြစ်တယ်နဲ့ အပြစ်ရှာပြောတာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု ရှိလာပါပြီ။ အဲဒီတော့ ဇော်အကြောင်းလေးလည်း နည်းနည်း ထည့်ပြောရအောင်။ ဒီနေရာမှာ ဒီစာကိုဖတ်တဲ့လူက ဒီဇော်-ယူ ပြဿနာအကြောင်း တော်တော်သိထားတဲ့ လူလို့ ယူဆတဲ့အတွက် ဇော်ကအရင်ထွက်တာတို့၊ ယူနီကုဒ်က နောက်မှထွက်တာမဟုတ်လားတို့၊ နှစ်မျိုးပေါင်းလိုက်ပါလားတို့၊ ဘယ်ဟာကစံလဲတို့၊ အင်ပွတ်နဲ့ဖောင့် မကွဲတဲ့ ကိစ္စတို့လို အဓိပ္ပါယ် မရှိတဲ့ကိစ္စတွေ ထည့်မတွေးတော့ဘူး ယူဆပါတယ်။
(၁) ဇော်ဆရာတို့လိုချင်သလို u1039 သာ အသတ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆို ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ အရှေ့က ပါဌ်ဆင့်နဲ့ရေးထားတဲ့ဒေတာတွေအကုန် အသတ်ဖြစ်ကုန်တဲ့အတွက် ပျက်ပါပြီ။ တိုင်းရင်းသားအတွက် reserve လုပ်ထားတဲ့ နေရာတွေကို မဆင်မခြင်ဗမာစာပုံပြောင်းဖို့ ယူသုံးထားတဲ့အတွက် တခြားတိုင်းရင်းသားဒေတာတွေလည်း ပျက်ပါပြီ။ So much for backwards-compatible.
(၂) ဇော်ဆရာတို့ရဲ့ ဖောင့်ဟာလည်း ယူနီကုဒ် ဘာပွိုင့်ဇီးရိုး ဘာပွိုင့်ဝမ်းနဲ့မှ မညီတဲ့ ဖြစ်သလိုလုပ်ထားတဲ့ ယူနီကုဒ်ပျက်ဆိုတာ လက်ခံဖို့ လိုပါမယ်။ Unicode 4.0 Ligature ပြောင်းတာလောက်က ခုခေတ်မှာ ဖောင့်ရေးကာစ ကလေးတောင် လုပ်တတ်တယ်။ ပုံပြောင်းစနစ်မထောက်ပံ့သေးလို့ဆိုရင် PUA ကို သုံးတော်မူ၊ ဒီဘက်ခေတ် ဒီပြဿနာတွေ ရှင်းစရာ ဘာအကြောင်းမှမရှိ။ သူ့ထက်အပြင် ယူနီကုဒ်ဖြစ်ချင်တာလည်း နှစ်ယောက်မရှိ။
(၃) ဇော်ဆရာတို့ငါးယောက်က ဇော်ဖောင့်ကို တီထွင်တာမဟုတ်ဘဲ မြစေတီကို ကူးချလို့ လူမိသွားကာမှ ပုံပြောင်းအက္ခရာတွေကို တိုင်းရင်းသားစာနေရာတွေကို ကူးထည့်ထားကြောင်း မှတ်မိဖို့ လိုပါမယ်။ ဒါကြောင့် မြစေတီနဲ့ ပုံတူဖောင့်တွေဖြစ်တဲ့ ဘစ်ဖောင့်၊ အယ်လ်ဖာဖောင့်(ဇော်ဂျီဟု အမည်မပြောင်းခင်)စတာတွေဟာ မြစေတီအတိုင်း ပုံပြောင်းအက္ခရာနေရာတွေနဲ့အတူတူ PUA နေရာတွေမှာ ဖြစ်ကြောင်း သတိရဖို့ ဦးနှောက်ကို ပြန်အလုပ်ပေးဖို့ လိုပါမယ်။ ဇော်ဆရာတို့ PUA ဆိုတာ ကြားဖူးရင် ဆင်ခြင်တတ်ရင် ဒီနေ့ဒီလို ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းတောင် မရှိပါဘူး။ (အရင်ရေးထားတဲ့ ပို့စ်)
(၄) ဇော်ဖောင့်ရဲ့ မြန်မာမဟုတ်တဲ့ အက္ခရာတွေဟာ Tahoma, Arial စတဲ့ ဖောင့်တွေကို တိုက်ရိုက်ကူးယူထားတာမို့လို့ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနဲ့ငြိနေကြောင်း၊ ဥပဒေက ဘာမှ လာမလုပ်ရင်တောင် လိပ်ပြာသန့်ရဲ့လားတွေးကြည့်မိဖို့ လိုပါမယ်။ ‌ကော်ပီရိုက်နဲ့ အနည်းနဲ့အများချိုးဖောက်ထားတဲ့ ဖောင့်တစ်ခုကို App တွေ ဆော့ဝဲတွေ ဖုန်းတွေမှာ ဝက်ဆိုက်တွေ (အစိုးရနဲ့ မီဒီယာဝက်ဆိုက်တွေတောင် ပါသေး) တစ်ခါတည်းထည့်ထားတာကိုလည်း Ethical ဘက်က ကြည့်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ကြရဲ့လားလို့။ ကော်ပီရိုက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်ကြတဲ့ လူတချို့တောင် ဇော်ကိစ္စမှာ Double Standard ဖြစ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တရားပါတယ်ပေါ့ Justify လုပ်ကြတာကိုလည်း တွေ့မိပါတယ်။
(၅) ဇော်ဖောင့်တွင်ကျယ်လာတာနဲ့အမျှ သူနဲ့ ယှဥ်တွဲဖော်ပြလို့မရတဲ့ တိုင်းရင်းသားဘာသာတွေ အသုံးလျော့နည်းလာတာ၊ တချို့ဆို မရှိသလောက်ဖြစ်တာကိုလည်း ဇော်ဖောင့်ဘက်က အကြောင်းပြချက်မရှိ၊ အကြောက်အကန်ကာကွယ်နေတဲ့သူတွေ ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ လိုပါမယ်။
(၆) စတန်းဒတ် နှစ်မျိုးတွဲသုံးလို့ရပါတယ်လို့ လေသံပစ်ပစ်နေတဲ့ ဇော်ဆရာတို့ကိုလည်း သတိထားစေချင်တာက သူများ စတန်းဒတ်တွေက Co-exist အတူတကွယှဉ်တွဲနေနိုင်ပြီး၊ ဇော်က ယူနီကုဒ်စံနဲ့ ယှဉ်တွဲနေဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပါ။ (က) ဇော်မှာစံမရှိပါဘူး၊ ကြိုက်သလိုရိုက် အမြင်မှန်ပြီးရောဆိုတဲ့စနစ်ပါ (ဟိုတစ်ခါပြောတဲ့ မန္တလေးမြို့ကို ၃၈၄ မျိုးရေးလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုး၊ တကယ့်လက်တွေ့မှာကို အနည်းဆုံး ၁၀ မျိုးလောက်ရေးကြတယ်) (ခ) ဇော်သည် သီးသန့် Encoding လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ခမျာမှာ ယူနီကုဒ်ဖြစ်ချင်လွန်းလို့ ဇော်ယူနီကုဒ်လို့ တစ်ချိန်လုံး ကြေညာပြီး ယူနီကုဒ်ဟန်ဆောင်လာခဲ့တဲ့၊ ယူနီကုဒ်ရဲ့ အားသာချက်တွေကို အချောင်နာမည်ကောင်းဝင်ယူလာတဲ့၊ မရှိသင့်တော့တဲ့ စနစ်ဆိုတာ နားလည်ဖို့ လိုပါမယ်။
(၇) ဇော်ဆရာတို့ဟာ အခုချိန်မှာ အမျိုးစုံပြောနေပေမယ့် ဘယ်အချက်ကြောင့် (က) ဇော်ဆရာသည် ဘိုစာကောင်းကောင်းမဖတ်တတ်လို့ ၊ (ခ) ဖတ်တတ်သော်လည်း သဘောမပေါက်လို့၊ (ဂ) ပေါက်သော်လည်းဒီပွဲကိုလာတက်တဲ့ ဘိုကြီးတွေကိုကြောက်လို့ ဒီပင့်ရစ်ဆွဲထိုး အသတ်ကိစ္စမှာ လက်မှတ်အကြီးကြီး ထိုးခဲ့တာပါလဲ။ သဘောမတူရင်လည်း အစကတည်းကမထိုးနဲ့၊ ခုမှ တောင်ပြောမြောက်ပြော။
(၈) ဇော်ဆရာတို့က ယူနီကုဒ်သည် အသစ်အသစ်ဖြစ်သွားတဲ့ အခြေအနေတွေကို သူတို့ကို အသိမပေးဘဲ ဥ-ထားတယ်လို့ မီဒီယာတွေမှာ ခဏခဏပြောပါတယ်။ ယူနီကုဒ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အီးမေးလ် Thread မှန်သမျှကို ဖွင့်ပေးထားတာမို့ Follow up လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိရင် လူတိုင်းကြည့်နေလို့ ရတာ သင်သိပါသလား။ ဥ-ထားတယ်လို့ ခဏခဏ ထုတ်ထုတ်ပြောနေရတာ အခြေအနေသုံးရပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (က) Search Engine မသုံးတတ်လို့ (ခ) ဘိုလိုမဖတ်တတ်လို့ (ဂ) ကိုယ်လုပ်တာပဲအဟုတ်မှတ်ပြီး သူများတွေ ဘာလုပ်နေလဲ စိတ်မဝင်စား။
(၉) ဇော်ဆရာတို့ အလိုကျ အသတ်နဲ့ ပင့်ရစ်ဆွဲထိုးတွေကို ဇော်ဖောင့်အတိုင်း လက်ရှိယူနီကုဒ်ကို ပြောင်းပေးလိုက်ပါပြီတဲ့။ ဇော်ဆရာတို့ ပြောပြောနေတဲ့ ဖတ်လို့အဆင်ပြေတယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စတကယ် ဖြစ်မဖြစ် ကြည့်တော်မူ။ အောက်ကပုံ။ ပြောင်းပြီးရင် (က) မူလ ယူနီကုဒ်အဟောင်းအသစ်တွေနဲ့ရေးထားတဲ့ ဒေတာတွေသုံးမရ (ခ) ဇော်ဒေတာတွေသုံးမရဖတ်မရတော့ (ကွန်ဗာတာအသစ်ထွင်ပြီး မရရအောင်လုပ်ရင် ရမှန်းသိတယ်၊ ဇော်ဆရာတို့ ပြောနေကျအတိုင်း ပြောကြည့်တာ)။
(၁၀) Zawgyi.net ဝက်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဇော်ဆရာ ငါးယောက်ကို သင်သိပါသလား။ သို့မဟုတ် ဝန်ခံထားတာ တွေ့ဖူးပါသလား။ ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ဇော်ဖောင့်က ဆုတစ်ခုရပါတယ်။ ဆုပေးတဲ့သူနဲ့ ဆုယူတဲ့သူကို သင်သိပါသလား။ စေတနာ ရှိလွန်းလို့ အပြောအဆိုခံပြီး ဇော်ဖောင့်ကို လုပ်တာပါဆိုရင် ဇော်ဆရာတို့ငါးယောက် မြစေတီဖိုး သက်သာသွားတဲ့ ငွေတွေရယ်၊ ဇော်ဖောင့်ကိုသုံးပြီးရောင်းခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုက ရခဲ့တဲ့၊ ရနေဆဲ အကျိုးအမြတ်တွေထည့်ပြောဖို့ အစီအစဉ်ရှိမရှိ။
(၁၁) အဲလို အတိတ်ကအရေးမပါတာတွေကို ဇာချဲ့ပြီး ပြောပြောနေတော့ရော ဘာထူးမှာလဲ။ မျက်စိစပါးမွှေးစူးလာရင် အထုပ်‌ဖြည်ပြမယ့်လူတွေ ရှိပါတယ်လို့။ ယူနီကုဒ်သုံးသင့်တယ်ဆိုတာ သိနေတာပဲ။ ကန့်လန့်တိုက်လေ တိုင်းပြည်နာလေ။ ဇော်ဘက်က ယူနီကိုဖိုဘီးယားဖြစ်ပြီး အကြောက်အကန်ငြင်းနေသူတွေ ဆင်ခြင်ကြည့်၊ ကိုယ့်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘဲ ပေါက်ကရလုပ်ထားတဲ့ ခိုးကူးပရောဒတ်တစ်ခုအပေါ်မှာ ကာကွယ်နေရတာတန်ရဲ့လား။
အရင်တစ်ခေါက်က ရေးထားတာလေးပျောက်သွားလို့ ပြန်ရေးလိုက်တယ်။
ဝီကီပီးဒီးယား ကိစ္စပါ။ ရှင်းသင့်တယ်ထင်လို့ရေးပါတယ်။ ဟိုလူ့ပြောသလိုလို ဒီလူ့ပြောသလိုလိုမဖြစ်အောင် နာမည်တွေ ထည့်လိုက်ပါတယ်။
ဝီကီးပီးဒီးယားကို ကိုဇော်သက်တို့စရေးကြတော့ ယူနီကုဒ်နဲ့ရေးလို့ လူနည်းပါတယ်ဆိုပြီး အိုကီးစံက ကမကထပြုလို့ ဇော်ဂျီနဲ့ရေးတဲ့ ဝီကီမြန်မာကို ရေးကြပါတယ်။ ဘန်ကောက်မှာ ဝီကီပီးဒီးယန်းတွေတွေ့ကြတော့ နှစ်ဘက်လုံး article တွေ မျှသွားအောင် convert လုပ်ပြီးထည့်ကြမယ်လို့ သဘောတူကြပါတယ်။ ဝီကီမြန်မာရဲ့ အဓိက contributor တွေဖြစ်တဲ့ ကိုဟန်ဇော်၊ ကိုမြင့်ကျော်၊ ကိုသင်ကာ၊ လဂွန်းအိမ်နဲ့ ကိုမေယာတို့ သူတို့ article တွေရော အဟောင်းတွေရော ဟိုဘက်ဒီဘက်စုံအောင် ပြောင်းကြပါတယ်။ နှစ်ဘက်လုံးမျှသွားတဲ့အချိန်မှာ ဆောင်းပါး ၃၀၀၀ ကျော် ရှိလာပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ organize လုပ်ရလွယ်တဲ့ မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားမှာ ဆက်ရေးကြပါတယ်။ အခုတော့ ဆောင်းပါးပေါင်းလေးသောင်းနီးပါးရှိလာပြီး content များတဲ့ဆောင်းပါး တစ်သောင်းလောက်ရှိပါတယ်။
ဝီကီမြန်မာမှာပါခဲ့တဲ့ စည်သူအောင်က ဝီကီမြန်မာ wikimyanmar.co.cc ကို မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားက ဒေတာတွေ “ခိုး”ထားပါတယ်လို့ ရေးပါတယ်။ သူ့အပေါင်းအသင်းတွေကလည်း share ကြဖွကြဖြန့်ကြပါတယ်။ ပြဿနာက ဝီကီမှာ ဘယ်သူက ဘယ်နှစ်ပုဒ်ရေးထားတယ် ဘယ်ဆောင်းပါးကို edit လုပ်ထားတယ်ဆိုတာ ပြန်ကြည့်လို့ ရနေတာပါပဲ။ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ စည်သူအောင်က discussion တွေတွေမှာ အများကြီးပြောထားပေမယ့် contribute တကယ်လုပ်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးက ၃၀ ပဲရှိပါတယ်။ ဝီကီမြန်မာအခုမရှိတော့ပေမဲ့ မီဒီယာဝီကီ backup ဖိုင်ကို ဒီမှာ ပြန်ယူပြန်သွင်းပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ https://archive.org/download/wiki-wikimyanmarcocc_wiki
ဝီကီနှစ်ခုလုံးမှာရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေက cc3 လိုင်စင်အောက်မှာ ရေးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သူမဆို ကူးယူ ဖြန့်ချိ ပြင်ဆင်ခြင်းကို ခွင့်ပြုထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ခိုးပါတယ်ဆိုလာတော့ ဒီလိုင်စင်ကိုများ မသိလို့လား မေးစရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝီကီမြန်မာမှာ ဆောင်းပါးသုံးဆယ်ရေးပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးလည်းတင်၊ အသိအမှတ်လည်း ပြုပါတယ်။
ကီးဘုတ်အကြောင်းပြောနေတာတွေ့လို့ပါ။ စတန်းဒတ်ကီးဘုတ်ဆိုရင် မြန်မာ၃ လက်ကွက်ကိုပဲ ညွှန်းပါတယ်။ ဝင်းဒိုးမှာပါလာသလို၊ လင်းနက်က xkb မှာလည်း ပါပါတယ်။ မိုဘိုင်းမှာတော့ ကီးအသစ်တွေ feature အဆန်းတွေ ထည့်ကြတာတွေ့ပါတယ်။ အင်ပွတ်က complex reordering ပြန်စီပေးတာ ရမရပေါ်မူတည်ပြီး သဝေထိုး ရှေ့ကရိုက်လို့ရတဲ့ဟာနဲ့ နောက်ကရိုက်လို့ရတဲ့ဟာရယ်လို့ ရှိပြန်ပါတယ်။ dummy proof ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် auto suggestion နဲ့ sequence အမှားတွေ မှန်အောင်ပြန်ပြင်ပေးတဲ့ feature ပါလာဖို့ လိုပါမယ်။ ဖန်ခွက်မှာ ရေတစ်ဝက်လျော့နေတာလား ရေတစ်ဝက်ရှိနေတာလားကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်၊ ရပ်တည်မှုနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါမယ်။
ယူနီကုဒ် လေး ငါး တွေအကြောင်း ပြောချင်လို့ပါ။ ဇော်ဂျီက ယူနီကုဒ်လေးကို အခြေခံထားတယ်ဆိုတာရယ် ယူနီသမားတွေက စိတ်ပုတ်ပြီး ယူနီကုဒ် ငါးမှာ ပင့်ရစ်ဆွဲထိုး တစ်ကွက်ရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတာရယ်။ ဇော်ဆရာတွေကလည်း အဲဒီအကြောင်းတွေ ခဏခဏပြောပါတယ်။ ယူနီကုဒ်ကိစ္စတွေ ဝင်မပြောတော့ဘူးတွေးပေမယ့် ရှင်းသင့်တယ်ထင်လို့ ရေးပါတယ်။
ယူနီကုဒ် 4, 4.1, 5.0 ထိ မြန်မာစာကုဒ်ပွိုင့်နဲ့ အန်ကုဒ်ဒင်းက တူတူပါ။ ပင့်ရစ်ဆွဲထိုးနဲ့အသတ်အတွက် ကုဒ်ပွိုင့်မရပါ။ ဝိရာမ ရယလဝ မော်ဒယ်နဲ့ ရေးရပါတယ်။ 5.1 မှာ ပင့်ရစ်ဆွဲထိုးနဲ့ အသတ်စရပါတယ်။
ဇော်ဂျီက ယူနီကုဒ် ၄ ကို အခြေခံတယ်ပြောရင် ဒီလူဖြီးနေပြီလို့ တွေးပါတယ်။ ဇော်ဂျီက မြစေတီကို အခြေခံတယ်ဆိုတာ အဲဒီခေတ်ကို မီလိုက်တဲ့လူတိုင်း သိပါတယ်။ http://www.myazedi.com/downloads/Issues1.swf . စာလုံးပုံပြောင်းတဲ့နည်းပညာကို မလုပ်တတ်သေးတာကြောင့် အဆင်ပြေသလို ကြုံရာနေရာမှာ ပင့်ရစ်ဆွဲထိုးနဲ့ အသတ် ပါဌ်ဆင့်တွေထည့်ပြီး အမြင်အတိုင်းစာရိုက်တဲ့ စနစ် လုပ်ပါတယ်။ ၅.၁ အဆိုပြုချက်နဲ့ ထုတ်တဲ့ယူနီကုဒ်ဖောင့် မြန်မာ၃ ထွက်မလာခင် ရက်ပိုင်းလေးမှာ ဇော်ဂျီကို လူသိရှင်ကြား “ယူနီကုဒ်ဖောင့်” လို့ ကြေငြာပြီး ထုတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဇော်ဂျီဆရာတို့လည်း ၅.၁ အတွက် လက်မှတ်ထိုးပြီးပါပြီ။ http://www.unicode.org/L2/L2006/06077-n3043r-myanmar.pdf ကြားထဲမှာ update အီးမေး thread တွေအကုန်လုံး ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုတီယမ်က public ဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ follow up လုပ်နေရင် အကုန်သိနိုင်ပါတယ်။
ဇော်ဂျီကို အပ်ဒိတ်လုပ်လိုက်ရင် လာဖြစ်သွားမယ် ညာဖြစ်သွားမယ်ပြောနေသူတို့လည်း ဇော်ဂျီ၂၀၀၉ ဆိုတာ ကြားဖူးလိုက်ရဲ့လားလို့ မေးချင်ပါတယ်။ အတ္တတွေကြောင့် မြန်မာနဲ့ တိုင်းရင်းသားဘာသာတွေ အစမ်းသပ်ခံ အနှိမ်ခံဖြစ်နေတာကြာပါပြီ။ စိတ်ဝင်စားသူများ အင်ဖော်မေးရှင်းတွေကို ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ ဒီပို့စ်ကို တင်ပါတယ်။
အသတ်သည် နောက်ဆုံးမှာသိမ်းတယ်ဆိုတာ လူပြိန်းနားလည်အောင်ယေဘုယျပြောထားတာ။ နောက်တစ်ခုက ဝဆွဲနဲ့အသတ် ကပ်ရပ်သုံးထုံးမရှိပါ။ မွန်ဘာသာမှာ ဟထိုးကိုအသတ်နဲ့တွဲသုံးရင် ဟထိုးသည် ဟရဲ့အကျဉ်းချုပ်ပုံစံဖြစ်လို့ အသတ်ရဲ့ရှေ့မှာနေပါတယ်။ ရှမ်းဗျည်းတွဲ ဝ u1082 သည် သရအဖြစ်လည်းသုံးလို့ အသတ်ရှေ့မှာနေပါတယ်။ ဗျည်း နဲ့ကပ်ရပ် သရမပါဘဲ ဗျည်းတွဲယ နဲ့ အသတ်ကပ်ရပ်ဆိုရင် အသတ်ကိုရှေ့မှာနေရာချပါတယ်။ ဒါတွေအကုန် utn11 ထဲမှာ ရေးထားတယ်။ ဖတ်ပါလို့ ပြောတာ ကိုယ့်ကိုတောင် ပြန်ဖတ်ခိုင်းလိုက်သေးတယ်။ ကျွန်တော်မျိုးကြီး သေသင့်ပါတယ်။ မသိလို့မေးရင် နည်းနည်း humble ဖြစ်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်။ မသိလို့လည်းမေးသေး ထောင့်မကျိုးဘူးဆိုရင် သိတဲ့သူဘယ်သူမှ အဖက်လုပ်ပြီး လာဖြေမှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုလည်း အသေးစိတ်သိချင်တဲ့လူတွေ ရှင်းအောင် လာပြောတာ။ မရှင်းရင် မာတင်ဟော့စကင်နဲ့ ယူနီကုဒ် org ကို အီးမေးပို့ပြီးသာ မေးတော့။ မကျေနပ်ရင် proposal တင်ပြီးပြင်။
သူတပါးကြိုးစားအားထုတ်ထားသည့်အရာကို အသိအမှတ်မပြုသည့်နေရာတွင် နှစ်ယောက်မရှိဟု အပေါင်းအသင်းများက ရှုံ့ချကြသည်။ မှန်လောက်သည်။ Fb တွင် Like ပေးရန်ပင် တွန့်တိုတတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။
I was being condemned for not easily appreciating other people’s efforts. They might be right since I rarely click “Like”s on Fb posts.
မြန်မာယူနီကုဒ်အတွက် js ကွန်ဗာတာ သုံးခုရှိသည်။ ကိုငွေထွန်း၏ ပါရဂူ၊ ကိုစိုးမင်း၏ ဘားဂလစ်ရှ်နှင့် ကိသ်၏ သံလွင်ဆော့ဖ်တို့ ဖြစ်သည်။ အခြားကွန်ဗာတာများသည် ယင်းတို့မှ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာရပ်သို့ ပြန်ဆိုထားကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယူနီကုဒ်နှင့် ဇော်ဂျီအကြား အဆင်ပြေစွာ ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြခြင်းကို ဤနေရာမှ အသိအမှတ်ပြုသည်။ ဤနှစ်ပိုင်းတွင် သတိပြုမိသည်မှာ ကိုသူရလှိုင်တင်ထားသော ပေတံ ကွန်ဗာတာသစ် ဖြစ်သည်။
There are3main js converters for converting to/from Unicode/Zawgyi which are Paragu converter by Ko Ngwe Tun, Burglish converter by Ko Soe Min, Thanlwinsoft converter by Keith. Other converters are just direct or indirect translations to respective languages. I salute their efforts from this blog. The new kid in town in recent years is Paytan Python converter by Thura Hlaing.
မည်သို့ဖြစ်စေ ကော်ပီထားလျှင် ထားကြောင်း ခွင့်တောင်းကြသည်၊ ခရက်ဒစ်ပေးရသည်။ အချို့က မပေးပေ။ အယ်လော်ဂရစ်သမ်ကို မိမိကိုယ်တိုင် ရေးသယောင်ယောင် ဖိန့်ကြသည်။ သို့သော် ယင်းတို့၏ ကုဒ်ဒင်းကို သုံးလေးကြောင်းမျှ စစ်ကြည့်လိုက်လျှင် သိနိုင်သည်။ အကယ်၍ ကွန်ပိုင်းလုပ်ပြီးသားဆိုလျှင် စစ်၍ မရနိုင်တော့ပြီလော။ မဟုတ်ပါ၊ reverse engineering လုပ်၍ဖြစ်စေ၊ အခြားနည်း အချို့ဖြင့်ဖြစ်စေ စစ်ကြည့်နိုင်သည်။ ကွန်ဗာတာတစ်ခုချင်းစီတွင် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် ဝိသေသများ၊ အမှားအယွင်း Bug များ၊ အယ်လော်ဂရစ်သမ်များ ရှိသည်။ ယူသုံးခဲ့လျှင် ခရက်ဒစ်တစ်ကြောင်းပေးလိုက်ခြင်းသည် ပင်ပန်းသော အလုပ်မဟုတ်ပါ။
Regardless of the usage, we need to requests and give credits to original creators. Some just don’t. Some pretend their products to be of their own brainchild. But they can be exposed by checkingafew lines of code. And if it’s already been compiled? We can also check by reverse engineering or some complicated methods. Each converter has it’s own uniqueness such as bugs and algorithm. It’s notabig deal to just giveasingle line of credit.
MM Font Converter Mobile App သည် ပါရဂူအယ်လော်ဂရစ်သမ်ကို (ယဉ်ကျေးအောင်ပြောလျှင်) သုံးကောင်းသုံးထားနိုင်သည် (သို့) သုံးထားရန်ရာနှုန်း ၉၉.၉၉၉% ခန့် ရှိသည်။ မဖြစ်နိုင်သော ၀.၀၀၁ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အစအဆုံးအိုင်ဒီယာတူသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
To simply put, MM Font Converter is most certainly likely using Paragu’s coding or algorithm.
အခြားသော နည်းလမ်းတို့ကို ချန်၍ အလွယ်နည်းပြောပါမည်။ ရှုပ်ထွေးသော စာတစ်ကြောင်းကို ငါးကြိမ်မျှ ထပ်ခါထပ်ခါ ကွန်ဗတ်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကွန်ဗာတာတစ်ခုချင်းစီမှ ထွက်လာသော ရလဒ်များ အယ်လော်ဂရစ်သမ် မတူညီသည်နှင့် အမျှ ကွဲပြားစွာ ထွက်လာသည်ကို တွေ့ရမည်။ အငြိမ်မနေနိုင်၍ ဘလော့မှ တဆင့် ပြောမိပါသည်။
I will present you an easy and safe way to check which converter is which. Convertacomplex phrase. Copy the result. Convert it again. Repeat5times. Results from each converter are similar at first conversion but unquestionably different after fifth conversion. This is my third rant about credits on this blog.
MM Font Converter developer Myat Min Soe decleared he created all function by himself in this fb post.
He later said that he took Zg->Uni function from Paytan converter but wrote Uni->Zg function by himself in this post. He also declear Paytan is GNU/GPL one of Open Source licenses, so he can use freely. The case here is when someone is using under GNU/GPL license, he must deliver his derivative work under same license along with proper credits. For that, I haven’t found the source code of his app anywhere yet (The source code foraversion popped up this morning in this link http://www.myatminsoe.com/ifyouvisitthisyouaremyson). Beside, he “copyrighted” the app in “About” page.
And he said again he “forgot” to credit Paytan but not others in this post.
And then he claimed again that he wrote the first two versions on his own and the last version was using Paytan in this fb post. He has no explanation for his “own” versions which I used as test-app and I don’t see any major differences in conversion results between versions.
Tags: converter, copyright, credits, myanmar unicode
အရွေ့ နှင့် အတွေး
ဒီရက်ပိုင်း မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ ဆိုတဲ့ ဖေ့(စ်)ဘုတ်အဖွဲ့လေးပေါ်လာတာ ဝမ်းလည်းသာ၊ အားလည်း ရမိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ တစ်ချိန်က ယူနီကုဒ်ပရိုမိုးရှင်းကို အားကြိုးမာန်တက်လုပ်ခဲ့တုန်းက မရခဲ့သည့် Awareness (လူတော်တော်များများရဲ့ သတိပြုမိမှု)၊ အကူအညီပေးနိုင်မှုတို့မှာ အများကြီး သာလွန်အောင် လုပ်ပြနိုင်သည်။ ယူနီကုဒ်ကို သုံးပြီဆိုကတည်းက တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ရှိသည့် လူတော်တွေဆိုသည်မှာ သိသာသည် ^_^ ။
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပတ်ရှုပ်(အလုပ်တွေပြောပါတယ်)နေလို့ ယူနီကုဒ်ထဲလည်းစိတ်မရောက်၊ ဝီကီလည်းမရေးဖြစ်၊ ဖွဘုတ်တောင်ကောင်းကောင်း မသုံးဖြစ်တော့။ အရင်လိုလည်း စိတ်မရှည်တတ်တော့။ ရေးချင်တဲ့ ဖောင့်အသစ်တွေလည်း မရေးဖြစ်ပါ။ ပြောချင်တာတွေတော့ ရှိသည်။
ဒါပေသည့် ကျွန်တော်သည် ဒီပလိုမက်တစ်ပါစင် လည်းမဟုတ်၊ အိုင်တီလောကနဲ့လည်း ယောင်ယောင်သာ ပတ်သက်သူဖြစ်လေရာ ပြောချင်တာတွေ ဒီဘလော့ကပဲ ပြောပါတော့မည်။
၁။ ယူနီကုဒ်ကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ပြောင်းခြင်း
“မိမိနှင့် နီးစပ်ရာ လူတွေကို ပညာပေးပါ။ ကူညီပါ။ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း ယူနီကုဒ်သုံးပါ။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ယောက်ကအစ တစ်ရာဆိုသလို မကြာမီ ယူနီကုဒ်ပြောင်းလာကြပါလိမ့်မည်။”
အင်မတန်ကောင်းမွန်သော သီအိုရီဖြစ်ပါသည်။ လုပ်နေကြသူတွေကိုလည်း အားပေးပါသည်။ သို့သော်…
ဒီပလိုမက်တစ်ဖြစ်လွန်းခြင်း၊ လက်ရှိ ဇော်ဂျီသုံးနေသောသူများကို အားနာခြင်း၊ အထူးသဖြင့် (ယူနီကုဒ် သုံးသင့်ပြီ ညီညွတ်ဖို့ အချိန်တန်ပြီ စသည်ဖြင့် နားထောင်ကောင်းအောင် ပြောနေကြပြီး လက်ရှိတွင် ကွန်ပျူတာ အဖွဲ့အစည်းများ၌ နေရာများယူထားကြသော်လည်း မိမိ၏ အဖွဲ့အစည်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ မိမိ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ မိမိ၏ ဖွဘုတ်တို့တွင် ဇော်ဂျီသာတွင်တွင် သုံးနေကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို) စီးပွားရေးအရ ဖြစ်စေ၊ လူမှုရေးအရဖြစ်စေ မဟားဒယား အားနာမိကြခြင်းတို့ကြောင့် မရဲဘဲ ကျွဲပြဲစီးနေကြရသည်ဟု (ဦးနှောက်သေးသေးလေး၏ တစ်ကိုယ်စာအမြင်ဖြင့်) မြင်မိပါသည်။
စတင်ဖွဲ့စည်းရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များထဲတွင် ကွန်ပျူတာသုံးမြန်မာစာကို စံစနစ်တစ်ရပ်အဖြစ် တိုးတက်၊ တီထွင်၊ သတ်မှတ်၊ သုံးစွဲရန် အချက်ကို ထည့်သွင်းထားသော်လည်း ယင်းအဖွဲ့အစည်း၏ ဦးဆောင်သူအများအပြားမှာ ပြောင်းလဲလိုစိတ် (လျော့ပါးစွာ) ရှိကြသူများ (ထိပ်သီး ဇော်ဂျီယူဇာများ) ဖြစ်နေခြင်းကိုလည်း အံ့ဩဘနန်း ရှိမိပါသည်။ မိမိ၏ ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းတွင် ယူနီကုဒ်ကို default အနေနှင့်ပင် တင်မထားသူများက တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများ၊ လူနည်းစု ဘာသာစကားများ တိုးတက်စေလိုသည် ပြောဆိုနေခြင်းကို (အပြင်းအထန်) သံသယ ရှိမိပါသည်။
ယူနီကုဒ်သုံးသူတိုင်းသည် ဇော်ဂျီသုံးဖူးသူများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဘာပြုလို့ မနေနိုင်မထိုင် ယူနီကုဒ်ပြောင်းသုံးသည်ကိုလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိကြပါသည်။ သို့သော် ယူနီကုဒ်ယူဇာ တစ်ယောက်တိုးတိုင်း ဇော်ဂျီယူဇာ အယောက်တစ်ထောင်မက တိုးနေသည်ကို သတိပြုပါ။
၂။ ဖောင့်များ ကီးဘုတ်များ ကွန်ဗာတာများ တိုးပွားလာအောင် ပြုလုပ်ခြင်း
“ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးအတွက် ဖောင့်အမျိုးမျိုး၊ လက်ကွက်အမျိုးမျိုး၊ ကွန်ဗာတာ အမျိုးမျိုးတို့ကို တိုးပွားလာသည့် ယူနီကုဒ်ယူဇာများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် အညီ တိုးတက်တီထွင်သင့်သည်။ သို့မှသာ Non-Unicode Users များကို ဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။”
မြန်မာစာအတွက် လုပ်သလို တခြား တိုင်းရင်းသား ဘာသာတွေအတွက်လည်း လုပ်နေလေရာ ယခုဆို ပြည်ထောင်စုဖောင့် ဆိုသည့် မြန်မာယူနီကုဒ်ဘလောက်တွင်းရှိ ဘာသာစကား အားလုံးနီးပါးလိုလိုကို ထောက်ပံ့သည့် ဖောင့်ပင် ထွက်နေလေပြီ။ ပြည်တွင်းရှိလူများသာမက မိုက်ကရိုဆော့က လည်းကောင်း၊ အက်ပဲကလည်းကောင်း၊ ဂူးဂဲလ်ကလည်းကောင်း ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည့် ဖောင့်များ ထုတ်နေကြလေပြီ။ သို့သော်…။
အမှန်တကယ် သုံးစွဲလိုသူတစ်ဦးအတွက် ဖောင့်တစ်လုံး လက်ကွက်တစ်ခု ရှိရုံနှင့် လုံလောက်ပါသည်။ ဥပမာ − ဇော်ဂျီ၊ ဝင်း။ သုံးစွဲသူ demand များလာသည်နှင့်အမျှ ဖောင့်၊ လက်ကွက်နှင့် ကွန်ဗာတာများ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့် အညီ အလျှိုလျှို ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မည်။
ယခုအခါ ဇော်ဂျီအခြေခံ ဖောင့်အမျိုးမျိုးကိုလည်းကောင်း၊ အင်မတန်မှ အဆင်ပြေလွယ်ကူသော ကီးဘုတ်ဆော့ဝဲများကိုလည်းကောင်း၊ ဤနေရာတွင် ဇော်ဂျီသုံးစွဲသူများအတွက် စေတနာဗရပွဖြင့် ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်၊ နာမည်ကြီးချင်းမကြီးခြင်းကို ပဓာနမထား၊ အသက်ကိုစွန့်၍ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ကီးဘုတ်ဆော့ဝဲများကို ဘုန်းပေါလအော ရေးပေးကြသူ ဒဗလော့ပါများကို လည်းကောင်း၊သုံးစွဲသူတို့၏ လိုအပ်ချက်ကို မားကက်အတွင်း ထဲထဲဝင်ဝင် သုတေသနပြု၍ (စေတနာရှေ့ထား ဇော်ဂျီအသင့်သား) ပါသော ဖုန်းများ ဖြန့်ဖြူးပေးကြသူ ဖုန်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုလည်းကောင်း၊ သုံးစွဲသူများ လက်ငင်း အဆင်ပြေစေရေး ရည်ရွယ်၍ ဇော်ဂျီဖြင့် မတ်စိများ တရကြမ်း ပို့ပေးကြသော တယ်လီကွမ်များကိုလည်းကောင်း လက်ခမောင်းခတ်လုခမန်း ဩဘာပြုမိပါသည်။
လူကြိုက် အနည်းဆုံး Option ဖြစ်သည်။ ပညာရှိများ မကြိုက်ပေ။ အသုံးခံခိုင်းသူလည်း မုန်းသည်။ စိတ်ပညာအားဖြင့် Reverse Psychology ဟုခေါ်သည်ဆိုလား။ “ယူနီကုဒ်သုံးကြ”ဟု အတင်းသုံးခိုင်းလျှင် ယူနီကုဒ်ကို မုန်းသွားပေမည် ဟူသည့် စိတ်ပညာ သဘောတရားဖြစ်သည်။ သို့သော် “ဇော်ဂျီသုံးကြ” ဟု ဆိုလျှင် … အဲ … ။
၂၀၁၀ တွင် ကမ္ဘောဒီးယား အစိုးရက အမိန့်တစ်ခုထုတ်သည်။ အစိုးရကွန်ပျူတာအားလုံးတွင် ယူနီကုဒ်ဖောင့်နှင့် လက်ကွက် သွင်းထားရမည်။ အစိုးဝက်ဘ်ဆိုဒ်အားလုံးတွင် ယူနီကုဒ်သာသုံးရမည်။ အစိုးရနှင့် အလုပ်လုပ်သော အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး ယူနီကုဒ်သာ သုံးစွဲရမည် ဟူ၏။ မိုက်မဲလှပေစွတကား။ ယခုမူ ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ယူနီကုဒ်တစ်မျိုးသာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးကြတော့သည်။ ရွေးချယ်ခွင့် နည်းလေစွ။
မျက်လှမ်းမီသမျှ MCPA, MCF, MCIA ဟူ၍ ကြီးသုံးကြီးရှိသည်။ မြန်မာပြည် အစိုးရလိုအပ်သမျှ ကွန်ပျူတာနည်းပညာ အကြံဉာဏ်များသည် ထိုအဖွဲ့တို့နှင့် တိုက်ရိုက်စပ်ဆိုင်သော၊ သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ သက်ဆိုင်သော လူများထံမှ လာသည်။ မြန်မာအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံး မြန်မာ၃ သာ သုံးရမည်ဆိုလား ဘာလား အမိန့်စာတစ်စောင် ဖတ်ခဲ့ဖူးသည်။ ယခုသော် သမ္မတဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည်လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည် လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ စံသတ်မှတ်ရေး အဖွဲ့သည် လည်းကောင်း၊ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးသည် လည်းကောင်း ဇော်ဂျီကိုဝမ်းသာအားရ သုံးကြ၏။ အဟောဝတ ကောင်းလေစွ။
လမ်းပျက်နေသည်။ ကွေ့သွား၍ ရသည်။ မနေနိုင်သူက ဝင်ပြင်သည်။ ရပ်ကွက်ထဲမှ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူတစ်ယောက် သူ့လမ်းပျက်နေသည်ကို သူတစ်ယောက် ဝင်ခင်းလျှင် သည်တစ်လမ်း ကောင်းနိုင်သည်။ သို့သော် လမ်းတိုင်းကောင်းရန် အစိုးရအဖွဲ့က ဦးဆောင်၍ ပေါ်လစီချမှတ်ရန် လိုအပ်သည်။
ကွန်ပျူတာဂျာနယ်များ မဂ္ဂဇင်းများတွင် အဆိုပါအဖွဲ့များ၏ ထိပ်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်များက ယူနီကုဒ်သုံးသင့်ကြောင်း တစ်ညီတညွတ်တည်း ပြောဆိုနေသည်ကို ဖတ်ရဖူးသည်။ ကွန်ပျူတာအစည်းအဝေးများတွင် ယူနီကုဒ်သုံးကြရန် ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ လုပ်ဆောင်ကြမည်ကို ကမ္ဘာကျော် NATO အဖွဲ့ကြီးပမာ ခေါင်းချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးနေသည်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ခဲ့ဖူးသည်။ စိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တကယ်လုပ်ချင်လျှင် ၊ တကယ်သုံးခိုင်းလျှင် တကယ်ဖြစ်ပါသည်။ (တနည်း) လုပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလျှင်၊ တာဝန်မဲ့ကြလျှင် ဖြစ်ချင်ယောင်သာ ဆောင်နေမည်ဖြစ်သည်။
ဆိပ်သာ မက်သနောစက်ရုံမှာ အမေတာဝန်ကျတော့ ကျွန်တော်လည်း အဲမှာပဲ ကျောင်းတက်ရတယ်။ မနက်ဆို ၈နာရီ တီအီးကားအမီ ထမင်းဘူးမပြီးပြေးရတယ်။ ကျောင်းက ရွာပြင်ဘက်နားမှာရှိတယ်၊ တွဲဘက်ကျောင်းလေးပါ။ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွေနဲ့ဆိုရင် မိနစ် ၂၀ လောက် မောင်းယူရတယ်။ ကားမမီရင် စက်ဘီးနဲ့သွားရတယ်။ မိုးတွင်း ရွှံ့မြေနီမှာ တောင်တက်တောင်ဆင်း စက်ဘီးနဲ့ ကျောင်းသွားရတာ စဉ်းစားကြည့်တော့။ လူက စက်ဘီးကို စီးရတာ စက်ဘီးက လူကိုစီးတာနဲ့ အတူတူလောက်ရှိမယ်။
မိုးဦး ကျောင်းစတက်တဲ့အချိန် တစ်နေ့ကျောင်းက စက်ဘီးနဲ့ ပြန်လာတော့ အိမ်နားက မြေနီနဲ့ ကျောက်စရစ်အရောရော လမ်းမပေါ်မှာ နီနီအကောင်လေးတွေတွေ့တယ်။ ဆိပ်သာရောက်ခါစ ပထမနှစ်က တစ်ခါတွေ့ဖူးတယ်။ သူများအိမ်နားမှာဆိုတော့ သိပ်မစပ်စုလိုက်ရဘူး။ မေးကြည့်တော့ ကတ္တီပါကောင်တွေလို့ပြောတယ်။ ကိုင်ကြည့်တော့လည်း အိစိအိစိနဲ့ တကယ့် ကတ္တီပါသားလေးတွေ ကျနေတာပဲ။ ကြည့်ရင်း အသည်းယားလာတာနဲ့ တွေ့သမျှကောက်လာပြီး အိမ်ယူခဲ့တယ်။ လမ်းမှာထားရင်လည်း ကားကြိတ်သွားဖို့ များတယ်လို့ တွေးမိတာကိုး။ အိမ်ရောက်တော့ လွယ်အိတ်ကို ပစ်ချ၊ အိမ်ရှေ့ဝရံတာထောင့်လေးမှာကပ်ပြီး သစ်တိုသစ်စတွေနဲ့ ဘောင်လေးလုပ်ပြီး သဲတွေ မြေကြီးတွေ ကောက်ဖြည့်တယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ စောစာက ကောက်လာတဲ့ ကတ္တီပါကောင်လေးတွေကို ထည့်လိုက်တယ်။ အမေအိမ်ပြန်လာတော့ သဲတွေနဲ့ ဆော့နေပြန်ပြီဆိုတဲ့ ပုံနဲ့ကြည့်ပြီး အိမ်ထဲဝင်သွားတယ်။
အိမ်နားမှာ ရှာလိုက်ရင် ပလူအတောင်ကျွတ် အသေကောင်လေးတွေ ပေါတာနဲ့ သူတို့စားဖို့ဆိုပြီး ကတ္တီပါကောင်ခြံလေးထဲ ထည့်ထည့်ပေးရတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် သူတို့ကို သွားသွားကြည့်ရတာ အမောပေါ့။ ကတ္တီပါကောင်မွေးပြီး သုံးရက်မြောက်နေ့ အိမ်ပြန်လာတော့ ကတ္တီပါကောင်ခြံလေး မရှိတော့ဘူး။ သစ်တိုသစ်စတွေ ဘေးမှာ ပုံထားတာပဲတွေ့တော့တယ်။ ငိုချင်ချင်ဖြစ်သွားပြီး အမေ့ကို မေးကြည့်တော့ မသိဘူးပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ အရှေ့ထွက်ပြီး ဟိုဟိုသည်သည် လိုက်ရှာတော့ ဒန်းစင်းလေဒီပန်းအိုးထဲမှာ သဲနဲ့ မြေကြီးအရောရော လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ထည့်ထားတာတွေ့ရော။ အသံကုန်ဟစ်ပြီးငိုတော့ အမေထွက်လာပြီး သူ့ပန်းအိုးလေးကို ပြန်သွန်ပြီးရှာပေးပါတယ်။ ဘာကောင်မှ မရှိတော့ဘူး။ သူလည်း ဘာကောင်မှမတွေ့ဘူးလို့ ပြောရှာပါတယ်။ အဲဒီတစ်နေ့လုံး မျက်ရည် တစိုစို နှပ်တရှုပ်ရှုပ်။
Tags: seiktha, story, Trombidiidae, velvet mite
မောင်သီဟတို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများသည် ရံဖန်ရံခါဆိုသလို လွန်စွာမှ ထူးဆန်းသော အပြုအမူတို့ကို ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြသည်။ ဥပမာ လွန်ဆွဲခြင်း။ လွန်ဆွဲတာ ဘာဆန်းတုန်း၊ တကမ္ဘာလုံး ဆွဲနေကြတာပဲ ဟု ဆိုလတ္တံ့။ ဆန်းသည်၊ ဆန်းတာမှ အတော့်ကို ဆန်းသည်။ လျှပ်စစ်မီးလာအောင် လွန်ဆွဲရခြင်း ဖြစ်သည်။
လွန်ကြိုးကို ဒိုင်နမိုနှင့်ဆက်၊ ၎င်းနောက်တွင် လူအားဖြင့် ဝိုင်းဆွဲကာ ဒိုင်နမိုကို လည်စေလျက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ယူရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းဟု သင်ထင်မြင်နေပါက လွန်စွာ မှားလေပြီ။
လွန်ဆွဲပါက မိုးရွာသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံတွင် အယူရှိကြသည်။ ကြည့်ရတာ မိုးနတ်မင်းကြီးသည် ကြိုးလေးတစ်ချောင်းကို လူတွေ ဟိုဘက်သည်ဘက်ဝိုင်းဆွဲကာ ဝရုန်းသုန်းကား ဖြစ်ကြခင်းကို အတော်ကြိုက်ဟန်တူသည်။ နာမည်ကိုက မိုးခေါင်ကျော်စွာနတ်တဲ့။ မိုးခေါင်အောင်လုပ်ရတာကို မိုးရွာပေးရတာထက် ကြိုက်ဟန်တူသည်။ ငယ်ငယ်က လွန်ဆွဲပွဲ ကြည့်ဖူးသည်။ အမျိုးသမီးတွေ တစ်ဘက်၊ အမျိုးသားတွေတစ်ဘက် ဆွဲကြခင်းဖြစ်သည်။ လက်တစ်ဆုပ်အရွယ် ကြိုးကြီးတစ်ချောင်းကို အလျားလိုက် ချထားသည်။ အလယ်တွင် တွင်းကြီးတူးထားကာ စည်းသတ်မှတ်ထားသည်။ တွင်းထဲကို စပြုတ်ကျသည့်ဘက်က အရှုံးဖြစ်သည်။ လူဖလံလေးတွေ၊ အားမရှိသူတွေဟု ထင်ရသူတွေက ရှေ့မှာနေရသည်။ တော်ရုံတန်ရုံ ဗလကောင်းသူတို့က နောက်မှာနေသည်။ ဗလအကောင်းဆုံးသူက ကြိုးထိန်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးနေရာမှာ နေသည်။ ဖနောင့်ကို မြေပေါ်တွင်လှည့်လျက် တွင်းတူးကာ ကန်ထားသည်။ ထမီတွေ ပုဆိုးတွေကျွတ်အောင် ဆွဲကြသည်။ ဟိုဘက်ပါလိုက်၊ သည်ဘက်ပါလိုက်နှင့် နောက်ဆုံးတွင် အမျိုးသမီးများဘက်က နိုင်သွားလေသည်။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ စဉ်းစားမရ။ အမျိုးသားများသည် သဘာဝအ​ေလျာက် အင်အားကြီးမားသည် မဟုတ်ပါလော။ သို့ရာတွင် အင်အားသုံးရသော ပြိုင်ပွဲများတွင် ခန္ဓာအလေးချိန်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် မောင်သီဟ မှတ်သားမိလေသည်။
သည်ရက်ပိုင်း ဖ​ယောင်းတိုင်ကိုင်ပြီး ရန်ကုန်၊ မန္တလေး နှင့် အချို့မြို့ကြီးတွေမှာ ဆန္ဒပြကြတာ ကြားသည်။ အစိုးရဘက်ကလည်း အရင်လို “ဗြူးဗြူဗြဲဗြဲ”တွေ မလုပ်ဘဲ သတင်းစာကနေ လေသံပျော့နဲ့ တောင်းပန်သည်။ အဓိက ရေအားလျှပ်စစ်ပေါ်တွင် အားထားရသောကြောင့် မိုးတွင်းတွင် ပြည်တွင်းသုံးနိုင်သော လျှပ်စစ်အားထက် ပိုမိုထုတ်လုပ်ပြီး နွေတွင် ထုတ်လုပ်မှု နည်းပါးရသည်ဟု ဆိုသည်။ ပိုမိုထုတ်လုပ်တာတော့ မဖြစ်နိုင်။ နိုင်ငံအနှံ့ ရောက်အောင်မပေးနိုင်တာပဲ ဖြစ်မည်ဟု မောင်သီဟ တွေးသည်။ ငယ်ငယ်က မောင်သီဟနေခဲ့တဲ့ရွာမှာ အခုထိ ဖယောင်းတိုင်သုံးရတုန်း။ မီးလာခြင်း မလာခြင်းသည် သူတို့နှင့်မဆိုင်၊ မြို့နေလူတန်းစား၏ ကိစ္စဖြစ်သည်။ မောင်သီဟ ဆယ်တန်းဖြေခဲ့သည့်မြို့မှာ အခုထိ တစ်ရက်သုံးနာရီသာ မီးရပြီး သုံးရက်တစ်ခါ မီးပျက်တုန်း။ မီးလောင်မှုအကြီးအကျယ်တွေ ဖြစ်လိုက်လျှင်လည်း မီးပျက်နေတုန်းမေ့သွားလို့၊ ရှော့ဖြစ်လို့၊ ဖြူးစ်လောင်လို့ စသည့်အကြောင်းရင်းများက အများဆုံးဖြစ်သည်။
အခု”ဒီမိုကရေစီ”ဖြစ်ခါနီးအစိုးရက အရင်အစိုးရ အရှုပ်ထုပ်တွေကို ရှင်းရသည့်အထဲမှာ မီးပြဿနာကိုရှင်းရတာ အကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်မည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေက တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်းတို့ကို အနှစ်သုံးဆယ်၊ အနှစ်ငါးဆယ်စသည် ကြိုရောင်းထားလို့ ကုန်ပြီ။ အဲဒီက ရတဲ့ငွေတွေလည်း ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီမသိ။ ကွမ်းစားဆေးသောက် ကျပျောက်လို့ ကုန်ပြီထင်သည်။ သည်တော့ အလကားပဲတင်းရသည့် ရေအားလျှပ်စစ်ကိုသာ မျှော်ရတော့မည်။ သတင်းစာထဲတွင်ပြောသည်၊ မိုးရွာ​ေအာင် ဆုတောင်းကြပါ တဲ့။
ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး မြို့ထဲထွက်ဆန္ဒပြခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြင့် ရမည့် လျပ်စစ်ဓာတ်အားကို မျှော်လင့်ခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ မီးမှန်မှန်လာသည့် နေပြည်တော်ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့အကြံသည်လည်းကောင်း မဖြစ်နိုင်တော့ပြီ။ မောင်သီဟသည် ပုဆိုးကို မြှောင်အောင်ကြိုက်လိုက်ကာ လွန်ဆွဲနေကြသော ကလေးအုပ်၏ နောက်ဆုံးတွင် ဝင်ရပ်လိုက်သည်။ ဟိုဘက်က ကလေးထု၏ မကျေမနပ်သံတွေ ထွက်လာသည်။ မတတ်နိုင်၊ မီးလာဖို့အရေးကြီးသည်။
Myanmar at night, 2001, Satellite photo by NASA.
Summary: This essay is about “Tug of War” to get electricity in Myanmar. Traditionally, tug of war is usually held to get rain. Myanmar mainly relies on hydro powered generators for electricity. So, basically, the more rain, the more electricity. Crops can wait rain. But people cannot since most of everyday tasks need electricity. Despite the candle light protests, this isacrisis that government cannot solve immediately. So, the last desperate effort is to play tug of war to get rain to get electricity.
Tags: candle, electricity, Myanmar, protest, rain, tug of war